Public Kura | » जो पालिका अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्यको उम्मेदवार भए जो पालिका अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्यको उम्मेदवार भए – Public Kura
जो पालिका अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्यको उम्मेदवार भए
गुल्मी – पाँच वर्ष पालिकाको नेतृत्व गरेका व्यक्ति के गर्लान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । फेरि उही पदमा दोहोरिएलान् नभए त्यसभन्दा माथि प्रदेश सभा सदस्य तथा संघीय सांसद बन्न प्रतिस्पर्धा गर्लान् ।
गुल्मीमा भने यसको ठीक विपरीत भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भइसकेका एक नेता भने पदबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन् । गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्रीले पदबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका हुन् ।
सबैलाई अचम्मित पार्ने गरी उनले सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । अहिले उनी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । खत्रीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर चन्द्रकोट गाउँपालिका ३ को वडा सदस्य पदमा उम्मेदवार बनेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
उनी काँग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत हुन् । वडासदस्य जितेर जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख हुने लाइनमा उनले यस्तो रोजेको बताइन्छ । चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्षमा गठबन्धनबाट यसपटक माओवादी केन्द्रका नेता युवराज केसी अध्यक्षको साझा उमेदवार छन् ।
उपाध्यक्षको साझा उमेदवार काँग्रेस विष्णुप्रसाद भण्डारी छन् । नेकपा एमालेबाट अध्यक्षका उमेदवार चेतन बस्नेत छन् भने एमालेकै राधिका अर्याल उपाध्यक्षकी उम्मेदवार छिन् । खत्रीले पद सानो ठूलो नहुने बताए । सधै एउटै पदमा हुनुपर्छ भन्ने नभएको बताउँदै उनले राजनीतिमा धेरै कुरा सम्भव हुने सुनाए । तपाईं समन्वय समिति प्रमुख हुनका लागि सदस्यमा उम्मेदवार दिनुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो समयक्रमले बताउने जनाए ।